Ny vondron'olona KHMER ahitana vondrona ara-poko 54 any Vietnam - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
Ny KHMER dia manana mponina 1,112,286 XNUMX mifantoka amin'ny faritany Soc Trang1, Bac Lieu2, Vinh Long3, Tra Vinh4, Afaka Tho5, Kien Giang6 ary Giang7. Antsoina koa hoe Khmer-niaviany vietnamiana ary Khmer Krom.
Ny KHMER dia nipetraka tamin'ny Mekong Delta mandritra ny fotoana ela. Manana ny fitenenana sy ny fiteny mampiavaka azy ihany izy ireo. Ny fitenin'izy ireo dia an'ny Tarika Mon-Khmer8. Ny KHMER dia mifandimby miaraka amin'i Kinh ary Hoa in srok (tanàna) na phum (Hamlet).
Tsorina ny tranon'izy ireo, natsangana tamin'ny tany ary nopotehina tamin'ny ravina voanio na tiles. Ny tafo aoriana dia matetika noho ny iray aloha. Matetika ny KHMER dia manamboatra trano izay misy fandrefesana isa marobe. Ny varavarana fidirana misokatra atsinanana.
Ny KHMER dia nanamboatra fambolena vary mazoto efa ela. Manam-pahaizana manokana momba ny fisafidianana karazana vary izy, teknika fanondrahana ary fanariana ny tanimbary. Tombo-boasary ny voan-tanety eo amin'ny faritra maro izay itoeran'i KHMER. Ny KHMER koa dia mandray anjara amin'ny fiompiana omby ho traction, kisoa, akoho, alika ary trondro ary asa-tanana hafa (tenona, seramika ary fanaovana siramamy).
Ankoatra ny finoan'izy ireo, ny KHMER ao South Vietnam manaraka Brahmanisme ary Bodista Hinayana. Ireo dia hajaina Bodisma. Ny valan-jaza tsirairay dia manana pagoda izay ivon'ny hetsika ara-kolotsaina. Ny ankamaroan'ny tanora KHMER dia tonga mianatra sy manatsara ny hatsarany sy ny fahalalany amin'ny pagoda. Misy mihoatra ny 400 KHMER pagodas naorina South Vietnam. Tsy mampianatra script KHMER fotsiny ihany Fotopampianarana jiosy, ny pagodas KHMER dia mamindra ny traikefa amin'ny famokarana ihany koa Buddhist mpanara-dia.
Ny fokonolona KHMER South Vietnam mitahiry fanao sy fomba fanao maro. Ny kolontsainany sy ny kanto dia miavaka. Ny pagodas lehibe dia manana orkestra sy ekipa mpilalao junk. Isan-taona ny KHMER dia mandamina ny fialan-tsasatra amin'ny famatsian-drano sy ny fety nentin-drazana maro, ao anatin'izany Chon Chnam Thmay (Taom-baovao isan-taona), Buddhafitsingerenan'ny andro nahaterahana, Dolta (mamela ny maty), Ok Om Bok (fanompoam-pivavahana amin'ny volana), sy ny sisa.
Ny vahoakan'i KHMER dia manadio vary (Sourrce: trano famoahana VNA)
(Visited 1,428 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Vondron'olona Vondron'olona 54 ao Vietnam
NY FIVORIANA BANH GIAY sy BANH CHUNG →
Comments Off amin'ny Handeha ho an'ny TERT CEREMONIES - Fizarana 3
FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 2 (4,570)
Comments Off amin'ny THU DAU MOT - Cochinchina
Fitsidihana anio: 249
Andro farany 7 nitsidika: 2,224
Total visits: 420,475